क्रिप्टोकरेन्सीको पैसाको पासवर्ड पत्ता लाग्ला त ? « LiveMandu
क्रिप्टोकरेन्सीको पैसाको पासवर्ड पत्ता लाग्ला त ?
क्यानडी क्रिप्टोकरेन्सीको सीईओ गेराल्ड कटन केवल ३० वर्षका थिए, उनको कम्पनी क्वारडिका सीएस मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी छ । उनी क्रोन डिजेज नामक आन्द्राको सुन्नीने समस्याले ग्रस्त थिए र केहि दिनअघि भारतमा उन्को मृत्यु भयो । चलचित्रको संवाद र घटनाक्रम झैं उनको मृत्युले क्रिप्टोकरेन्सी क्वारडिकामा गरिएका अरबौं लगानीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । अब त्यस ब्लगचेन अन्तर्गत राखिएका पैसाहरुको एड्मीन पासवर्डका बिषयमा रहस्यमय रुपले पर्दा लागेको बताइन्छ । उनी भारतमा एउटा अनाथालय र सामाजिक कार्यका लागि आएका थिए तर उन्को दु:खद अन्त्य भारतमा भएको मिडियाहरुले र उन्कै कम्पनीको आधिकारिक फेसबुक पेजले जनाएको छ ।
उनको कम्पनीले सिईयोको मृत्युपछि नोभा पुप्रिम कोर्टलाई पासवर्डका कारणले भएका वित्तिय समस्याबाट आफ्ना ग्राहकलाई समस्या पर्न नदिन आवश्यक कदम चालिमाग्न आव्हान गरेको छ । गेराल्डले ह्याकिगं रोक्नका लागि अफलाइन राखेर आफूले मात्र पासवर्ड होल्ड गरेको बताइन्छ, उक्त कम्पनीमा १९० मिलियन डलरको लगानी रहेको बताइन्छ । उनकी पत्नीले भनें आफूलाई यसबिषयमा पतीले केहि नबताएको जनाएकी छिन् । गेराल्डले होल्ड गरेको पासवर्डभित्र एउटा पब्लिक कंप्यूटरमा २६ हजार बिटकोइन, ११ हजार बिटकोइन क्याश र २६ हजार लिटकोइन र ४ लाख ईथर को मौज्दात रहेको बताइन्छ । उनले प्रयोग गर्ने ल्यापटप इन्क्रिप्ट गरिएको र खोल्न असंभव रहेको बताइन्छ । पासवर्ड बिना ति रकमहरु त्यसै इन्टरनेटको संसारमा विलाएर जाने त हैनन ?
क्रिप्टोकरेन्सी व्यबस्थापनमा एउटा नयाँ चुनौती गेराल्डको असामहिक मृत्युले जनाएको छ । केहि षडयन्त्रकारी बिचारधाराका वक्तव्यहरु मान्छेहरुले जारी गरेका छन् र भनेका छन कि गेराल्डको मृत्यु एउटा षडयन्त्र र रकम पचाउने दाउ हो भनेंर । आखिर उनी त्यस्तो धेरै बिरामी थिए भनें किन भारत जान्थे त ? बिना कुनै लक्षण ३० वर्षका गेराल्डको असामहिक मृत्यु होस् या हत्या तर अरबौंको पैसो भएको ब्लगचेनको अकाउन्टको पासवर्ड उन्को मृत्युसगैं हराएको छ ।